राजेन्द्र खेतान | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय राजेन्द्र खेतान
२०२७ सालमा काठमाडौंको मखनटोलमा जन्मिएका राजेन्द्र खेतानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । १७ वर्षको उमेरदेखि उद्योग र व्यापारमा संलग्न रहँदै आएका उनी खेतान ग्रूपका अध्यक्ष हुन् । १५ वर्षराष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा बौद्धिक विचारकका रूपमा कार्य गरेका खेतानले व्यवसाय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेतृत्व गरेको १० वर्षबितिसकेको छ । संविधानसभाका सदस्य खेतानले सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको पनि जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटर, नेपाल-बेलायत चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्ष, वाणिज्य मन्त्रालयको ‘बोर्ड अफ हेड’को सदस्यलगायतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनी अग्रवाल सेवा केन्द्रका उपाध्यक्ष पनि छन् ।
आर्थिक ‘नवउपनिवेश’ नेपाल
नेपालको व्यापार प्रणाली पूर्णरुपमा भारतसँग निर्भर रहँदै आएको छ । लिच्छवी, मल्लदेखि शाह राजाहरुकै केही पुस्तासम्म नेपालको मुख्य व्यापार तिब्बतसँग हुने गरेको थियो । तर, एकीकरणसँगै नेपालको भूगोल जसरी विस्तारित हुँदै गयो भारतसँगको व्यापारमा पनि उल्येख्य वृद्धि हुँदै गयो । सन् १९५० को पहिलो व्यापारिक सन्धिपछि नेपालले तत्कालीन ब्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग व्यापार थालेको ऐतिहासिक आधार देखिन्छ । योबाहेक नेपाली भूभागसँग जोडिएका भारतीय सीमा वारपार सदिऔंदेखि व्यापार चल्दै आएको तथ्य भेटिन्छ । तर, नेपालमा आर्थिक उदारीकणको नीति अवलम्बन गरेयता द्विपक्षीय व्यापारको अनुपात हृवात्तै बढ्न पुगेको हो । सन् १९८५ मा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को संचरनागत सुधार कार्यक्रममा आफूलाई सामेल गरेलगत्तै नेपालमा आर्थिक उदारीकणको जग बसाइयो । अमेरिकामा उदार अर्थनीतिबारे अध्ययन गरेर आएका तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई उदारीकरणको पहिलो श्रेय जान्छ । उनले २०४४/४५ सालताका नेपालमा लाइसेन्स प्रथा हटाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेले । त्यही समयमा नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को पूर्वप्रारुप ‘ग्याट’मा सामेल हुन आवेदन दियो ।
२०४६ सालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाबाट खुला बजार अर्थनीतिमा आधारित उदार अर्थव्यवस्थामा परिणत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । ८० को दशकको मध्यबाट शुरु भएको आर्थिक उदारीकरणले ९० को दशकमा विस्तारित हुने मौका पाएसँगै नेपालमा निजीक्षेत्रले आफूलाई हुर्काउने र कारोबार आधारलाई फैलाउने मौका पायो । ठीक त्यही समयमा भारतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारीकरणको नीति लागू गराउँदै थिए । तर, भारतले आफ्नो कर नीतिलाई भने निकै कडा राखेको थियो । भारतमा भन्सार दरहरु निकै बढी थिए भने नेपालमा कम । उदारीकरणसँगै भारत आफ्नो बजार र अर्थतन्त्रको आकारअनुसार उच्च परिमाणको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बजारीकरणमा गयो । यसको प्रवाह नेपाललगायतका छिमेकी राष्ट्रहरुमा अत्याधिक हुन थालेपछि सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । दुई देशबीचको भन्सार अन्तरको लाभका भरमा चलिरहेका नेपाली उद्योगहरु त्यसपछि भने सङ्कटमा पर्न थाले ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई बचाउनका लागि नेपाली निजीक्षेत्रको पहलमा धेरै चरणको वार्तापछि सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धि हुन पुग्यो, जसले नेपाली वस्तुहरुको भारतीय बजारमा निर्बाध प्रवेशको व्यवस्था गर्यो । यो सन्धिले एकापसका प्राथमिक उत्पादनहरुलाई भन्सार छूटको सुविधा पहुँच दिएको थियो । यदि सो समयमा नेपाल-भारतबीच करमुक्त बजार प्रवेशको सुविधासहित वाणिज्य सन्धि नभएको भए आज नेपाल-भारतबीचको व्यापार ८०-२० वा त्योभन्दा पनि काहालीलाग्दो ९०-१० को अवस्थामा पुगिसकेको हुने थियो । अहिले दुवै देशबीचको व्यापार अनुपात ५५-४५ प्रतिशतको अनुपातमा छ । दुर्भाग्य के भइदियो भने नेपालले आफ्ना प्राथमिक वस्तुहरुको पहिचान र विकास नै गर्न सकेन, भारतसँगको व्यापारमा केही वस्तुको मात्र बाहुल्य रहन पुगेपछि सन् २००२ मा व्यापार सन्धि नवीकरण हुँदा भारत सरकारले यी वस्तुहरुमाथि कोटा लगायो । सन् २००९ मा व्यापार सन्धि नवीकरण भएपछि द्विपक्षीय व्यापारका लागि थप सीमानाका खोल्नेलगायातका केही महत्वपूर्ण व्यवस्था भए पनि नेपालको आन्तरिक औद्योगिक क्षमतामा कमीका कारण हामीले भारतसँगको व्यापार बढाउन सकेका छैनौं । बन्दहडताल, राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा तथा कर्मचारीतन्त्रलगायत औगिक विकासको बाधकका रुपमा रहेका छन् ।
भारतले नेपालको आयात-निर्यात व्यापारको ६७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । अझ यसमा दुई देशबीच हुने अनौपचारिक व्यापारको अंशसमेत जोड्ने हो भने यो अनुपात ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । नेपाल-भारतबीचको व्यापार अनुपात प्रतिशतको आधारमा घटेको भए पनि आकारको आधारमा बढेर गएको छ । गत आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को पहिलो ११ महीनामा नेपालबाट भारततर्फ रु. ३८ अर्ब ९५ करोड २७ लाखबराबरको वस्तु निर्यात भएको रु. २ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड १९ लाखको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । यसरी भारतसँगको व्यापारघाटा रु. २ खर्ब ८७ करोड ९२ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ । भारतबाट सामान आयात गर्नका लागि हामीले देशभित्र विभिन्न माध्यमबाट जम्मा भएको विदेशी मुद्रा बेचेर भारु किन्नु परिरहेको छ । बितेका केही वर्षदेखि नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा यसैका कारण भार पर्दै गएको छ । डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने अवस्था हरेक वर्षदोहारो अङ्कले बढ्दै गएको छ, यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन ।
यसरी मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएन, मुलुकको निर्यात व्यापारलाई बढाउन सकिएन र समग्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिएन् भने घाटाको खतरा विद्यमान रहन्छ । किनभने मुलुकले निर्यातबाट कमाउने रकमको तुलनामा आयातका लागि धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति बढ्दै जाँदा शोधानान्तर घाटा बढ्छ, मुद्रा अधिमूल्यन हुँदै जान्छ । देशका अन्य आर्थिक परिसूचकहरु पनि सकारात्मक नरहेको अवस्थामा यसरी लगातार व्यापारघाटा चुलिँदै जानु सकारात्मक कुरा होइन । अहिले देशको आर्थिक वृद्धि ३ देखि ३ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने मुद्रास्फीति दर १० देखि १२ प्रतिशतको हाराहारीमा । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य अधिमूल्यन हुँदै आएको अवस्थामा कमजोर आर्थिक परिसूचक भएको नेपालको मुद्रा भने अधिमूल्यनको अवस्थामा कायम रहनु अर्थतन्त्रका लागि सही लक्षण होइन । भारतसँगको स्थिर विनिमयदर कायम राखिएको र देशको ७० प्रतिशत व्यापार सोही मुलुकसँग कायम रहेकाले अत्यधिक आर्थिक निर्भरताको यो अवस्थाले मुलुकलाई नवउपनिवेशतिर धकेलेको छ । यदि हामीले आयात र निर्यातलाई समयमै सन्तुलित बनाउन सक्यौं भने मात्र भोलि हुने कुनै पनि किसिमको आर्थिक दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौं । अन्यथा, सन्तुलित अर्थव्यस्थाका लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै आन्तरिक उत्पादन र निर्यातलाई वृद्धि गर्नैपर्छ । नेपाल आर्थिक रुपमा नवउपनिवेश हुँदै जाने खतरा विद्यमान देखिन्छ ।